I-OEM & ODM IKEA ISPRIFT MATSTINT Uhlu lwamanani entengo | Rayson
I-Bonnell Spring Matress eshibhile wholesaleyenziwe ngePocket Spring, nge-5CM 3 Zone Foam, yimuphi amandla afanayo ezingxenyeni ezihlukene zomzimba. Ukunethezeka, okuhle, ukwakheka kwanamuhla. Leli phephandaba le-Hotel Spring elenzelwe ukusetshenziswa kwehhotela lezinkanyezi ezinhlanu kuphela. Ilungele impela i-High-End Star Hotel. Noma yiluphi usayizi nephethini kungenziwa ngezifiso.
Kusetshenziswa i-carbon yensimbi ephezulu, ukushisa okuphindwe kabili komlilo, kwenze kusebenze isikhathi eside kunentwasahlobo ejwayelekile.
Uphiko olusezingeni eliphezulu lweBonnell Spring ngaphandle kohlaka lungaba yi-vacuum ecindezelwe futhi ugoqeke esikhwameni sepulasitiki se-PVC
Intengo yokuphakamisa nayo iyindlela yakho engcono kakhulu yokwazi inzuzo yeBonnell Spring Matress.
Njalo ulwela ukubhekela phambili, iRayyson yathuthuke ukuba yibhizinisi eliqhutshwa yimakethe neligxile kumakhasimende. Sigxile ekuqiniseni amandla okucwaninga kwesayensi kanye nokuqeda amabhizinisi wenkonzo. Simise uMnyango Wezemisebenzi Amakhasimende ukuthi unikeze kangcono amakhasimende ngezinsizakalo ezisheshayo kufaka phakathi i-Order Tracking Isaziso. Ikea Spring Matress Sekuphele imali eningi kuMkhiqizo R & D, okuvela ukuthi siphumelele ukuthi sithuthukise umatilasi we-Ikea Spland. Ukuthembela kubasebenzi bethu abasha nabasebenza kanzima, siyakuqinisekisa ukuthi sinikeza amakhasimende imikhiqizo engcono kakhulu, izintengo ezinhle kakhulu, kanye nezinsizakalo eziphelele kakhulu. Uyemukelwa ukuxhumana nathi uma unemibuzo.Kuzongezela nakanjani i-charm kulabo abayigqoka. Kuvunyelwene ukuthi ukugqoke ngandlela thile kuthuthukisa ukuzethemba kwabantu ngokubukeka kwazo.
Silandela ngokuqinile izinqubo zokulawula ezisezingeni eliphakeme ukuqinisekisa imikhiqizo yethu ihlangabezana noma idlule okulindelwe kwamakhasimende ethu. Ngaphezu kwalokho, sinikezela ngezinsizakalo zangemva kokuthengisa zamakhasimende emhlabeni wonke.
Siyethembisa ukuthi imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende aphephile futhi azwakalayo. Uma unemibuzo noma ufuna ukwazi kabanzi nge-yethu, usishayele ngqo.
Amakhasimende afuna ukwazi kabanzi ngomkhiqizo wethu omusha noma inkampani yethu, vele uxhumane nathi.
Umatilasi wakho kufanele ugcine isikhathi esingakanani?
Wonke umatilasi wehlukile. Uma uphonsa ebusuku noma uvuke ngobuhlungu sekuyisikhathi sokuthola umatilasi omusha ngokungafani nobudala bawo. Sincoma ukubheka umaki wezomthetho bese ubeka okungenani okungenani iminyaka eyisishiyagalombili.
Yiziphi izindlela zokukhokha owamukelayo?
I-LC ekuboneni / nge-TT, 30% I-Deposi futhi ibhalansi engu-70% imelene namakhophi okuthumela amadokhumenti ezinsuku zokufunda eziyi-7.
Ngingawathola kanjani amasampula athile?
Ngemuva kokuqinisekisa ukunikezwa kwethu futhi usithumele izindleko zesampula, sizoqeda isampula kungakapheli izinsuku eziyi-15 ~ 20 izinsuku. Ungacela inkampani e-Express ukuthi ithathe isampula enkampanini yethu noma ungasithumela i-DHL, FedEx noma i-UPS iqoqe inombolo ye-akhawunti, singathumela isampula kuwe nge-akhawunti yakho.